María Angélica Marín avy any Santiago any Shily · Global Voices teny Malagasy
María Angélica Marín avy any Santiago any Shily
Voadika ny 21 Jolay 2019 6:24 GMT
Efa fanta-daza tsara ao amin'ny GV i María Angélica Marín : mpikambana ato amin'ny GV efa hatramin'ny 2009, mpandikateny ary avy eo mpanoratra, vao avy nohadihadiana mihitsy izy.
Shiliana i Maria Angélica fa manana razambe Frantsay ny fianakaviany ary hoentin'ny reniny mamonjy ny fandihizana rehefa 14 Jolay izy : tsy dia mahagaga loatra angamba ny hoe mandeha ho azy ny fandehanana mankany Frantsa, na dia mifanampy ho amin'izany aza ny fitambaran'ireo zavamisy.
Mipetraka any Santiago, izy ankehitriny, fa niaina 20 taona tany Frantsa, izay nahazoany namana sy fahatsiarovana maro. Kanefa, ireo fiandohana naharary sy nampangirifiry no mibahna toerana ao amin'ny resaka, na dia miresaka mikasika izany am-pihanihaniana aza izy androany: tsy manamora ny fidiran'ilay tovovavy 22 taona tonga saina amin'ny fomba fiteniny ho ao anatin'ny Frantsa Akademika fatra-mpiaro ny taloha ny sàkana ara-teny, ary vao miha manasaro-javatra koa ireo fahasamihafàna ara-kolontsaina.
Samy manana ireo lohahevitra tiantsika ato amin'ny Global Voices isika. Ny fahasalamana sy ny zon'olombelona ny an'i Maria Angélica. « Efa niaraka tamiko foana ny fahasalamana. Tamin'izaho iraika ambin'ny folo na roa ambin'ny folo taona, nilaza tamin'ny fianakaviako aho fa te-ho lasa mpitsabo. Nihomehy izy ireo ary nahatezitra ahy izany. Matotra be anefa aho eh ! » Toe-javatra maro no nitondra azy noy farany ho any amin'ny “biostatique”, avy eo tany Frantsa. « Nitazona izany fitodihana tany amin'ny fahasalamana izany foana aho tao amin'ny asako, na dia tao amin'ny demografia aza. Taty aoriana, nanontaniana aho hoe inona no lalan'asa nosafidiako, ahoana no atao mba hanarahana izany fiofanana izany, nampihomehy ahy izany : tsy mbola nisy izany tamin'izany fotoana izany ! Fa raha mbola tsy misy ny zavatra tiantsika atao, mila foronina izany, misy fomba foana hampivadiana ireo zavatra tiantsika. »
Nanomboka tamin'ny fahatongavan'i Pinochet teo amin'ny fitondrana ny fahalianany tamin'ny zon'olombelona, raha toa ka tsy afaka nody tany an-tanindrazany intsony izy ary miha-mahita olona maro natao sesitany : « Tsy mbola mety azoko foana hoe nahoana ny olona iray no afaka mandidy ny hafa tsy hiaina any amin'ny toerana tiany. » Nandrindra vondrona iray ho fanohanana an'ireo lasibatry ny fampijaliana tany Montréal ihany koa izy ary nanao fikarohana mikasika ireo mety ho antony ara-tsosialy sy ara-kolotsaina ary ara-pinoana nahatonga ireo fikarakarana tsy an-drariny atao amin'ireo vehivavy Latino-Amerikana sy Afrikana.
Rehefa tsy manampy ny hafa izy, mbola mahomby kokoa i Maria Angélica ny maraina sy ny alina ; mamaritra amin'ny endrika tononkalo ireo papaye kely shiliana sy ireo tsindrin-tsakafo matsiro azo atao avy amin'izany izy, ary tena hitako be izy lasa masoivohon'ny sakafo nentim-paharazana Shiliana. Tia mandehandeha, mandany fotoana miaraka amin'ny zafikeliny, mitsidika namana izy rehefa tsy mavitrika ho an'ny GV. Mihevi-tena ho sahirana be foana izy !
12 ora izayEoropa Afovoany & Atsinanana